Cholecystitis ngesikhathi sokukhulelwa
Kuyinto eyaziwa kahle ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa, umthwalo emzimbeni wesifazane uphindwe kabili, futhi ngenxa yalokho, ezinye izifo zingakwazi ukukhula. Kubandakanya, nezifo zesistimu yokugaya ukudla. Esinye sezifo zakhe ezivame kakhulu yi-cholecystitis. Ngokubukeka i-gallbladder ifana ne-pear engavundile. Kulo, i-bile iqoqa. Uma i-bile egxile kwi-gallbladder ikhuphuka - inqubo yokuvuvukala iqala. Lokhu kuthiwa yi-cholecystitis.
Ukugula kungase kuvele ngenxa yezici ezihlukahlukene. Lesi yisifo esingumzimba, nesifo esivela emaphethelweni emathunjini, kanye ne-dyskinesia yamapheshana wezinhlamvu. Ukuholeleka ku-cholecystitis kuhlanganiswa nokuhlala okuhlala njalo. Ngezinye izikhathi lesi sifo singabangelwa ukucindezeleka, i-hypothermia, ukuzama ukuqhubeka isikhathi eside.
Kuze kube manje , ngokusho kochwepheshe, inkinga enkulu, okuyinto eqondisa ngqo isifo salesi sifo, ukuphulwa kokudla. Kuyini isono ukufihla, sonke sidla somile futhi sihlasele, phakathi kwekhefu lomsebenzi futhi senze izikhala ezinkulu kakhulu phakathi kokudla.
Uma udla kabi futhi konke okungenhla - ngawe, ke ngokuqinisekile uyazi umuzwa wokufutheka emlonyeni, ubuhlungu ku-hypochondrium efanele, isifo sohudo, isicanucanu.
Akuyona imfihlo yokuthi ngesikhathi sokukhulelwa owesifazane kufanele anakekele ngokukhethekile ukudla okunomsoco. Ngoba manje kuncike kuye hhayi impilo yakhe kuphela nokuphila, kodwa futhi nendoda encane ngaphakathi. Futhi uma umama wesikhathi esizayo ukwengeza nge-cholecystitis, khona-ke ukunakekelwa kokudla okunomsoco kufanele kuphindwe kabili, cha, hamba!
Kuzodingeka ulahle yonke "ama-whims" akho awakhulelwe, afana nosawoti utamatisi, ukhukhamba oqoshiwe, utamatisi we-cask noma amaqebelengwane ayisikhilimu. Kusukela manje - akukho izitsha ezinamafutha, ezibhemayo nezingcolile. Thola amandla okusho lawa nemikhiqizo efanayo "cha." "Yebo" - i-porridge, inyama ebilisiwe nenhlanzi, ama-puddings, imifino, isobho , izithelo nezitshalo zobisi , ukudla okunomsoco. Kusukela eziphuzweni, khetha i-compotes, i-herbal teas, i-kissels, amanzi amaminerali, imikhiqizo yobisi oluvuthiwe nobisi. Ngendlela, ngisho noma ungenayo i-cholecystitis, kufanele uqhubeke unamathela ekudleni okunempilo.
Uma nje usolwa nge-cholecystitis - ungalibali ukuvakashela ochwepheshe, masinyane uye endlini yokwamukela. Ukwelapha lesi sifo, udokotela uzobe ebeka umuthi wokudla kanye nemithi ekhethekile, ecabangela isimo sakho esithakazelisayo.
Futhi, inqubo ye "blind blinds" izoba usizo kakhulu ekwelapheni lesi sifo. Ukuze kusetshenziswe, isitsha esisodwa noma amabili samanzi afudumele, afudumele amaminerali noma ukuchithwa okufanayo kwokhula lwe-cholagogue kufanele kudakwe esiswini esingenalutho ekuseni. Ngemuva kokuthi udinga ukulala, ngokuqinisekile ngakwesokudla sakho bese ulala phansi isikhathi esingangehora noma ihora nengxenye. Ngalesi sikhathi ungalala, nje ulale ngamehlo akho uvaliwe, uphupha ngento ethile, noma ufake umculo omnandi futhi ufunde incwadi noma umagazini. Noma yini okwenzayo ngalesi sikhathi, into esemqoka ukuphumula ngangokunokwenzeka. Khona-ke uzokwazi ukufeza umphumela omkhulu.
Ngokuvamile, ochwepheshe abaqeqeshiwe bayeluleka ukuqhuba inqubo enjalo kanye ngesonto. Kodwa konke okufanayo kuyoba ngcono uma uxoxa ngalesi sikhathi nomdokotela wakho. Qinisekisa ukuthi ucacise inombolo yalezinqubo. Cabanga futhi ngokuthi nge-peptic isifo sesilonda se-duodenum nesisu nokuhlaselwa okunamandla kwe-cholecystitis, imisebenzi enjalo ihlukaniswa ngokulinganayo. Kwezinye izimo, le nqubo isisiza ukugcina kahle i-gallbladder.
Usongo lokukhulelwa kwesisu ngesikhathi sokukhulelwa, okufanele ukwenze
Izikhukhula ku-trimester yokuqala yokukhulelwa
Ukudla okunempilo ngesikhathi sokukhulelwa
Ungakhulelwa kanjani ukuba ube mnandi?
Indlela yokuhlela ukukhulelwa kusengaphambili ngumfana
Ukuthuthukiswa kwengane kuze kube unyaka
Ama-headdress wangempela: ekwindla - ebusika 2016-2017
Indlela yokusinda ukuhlukaniswa okwesikhashana?
Isimo sezulu nokushisa kwamanzi eCrimea ngo-Agasti 2016 kubikezelwa yisikhungo se-hydrometeorological. Ngokuvamile isimo sezulu ku-Agasti eCrimea ngokusho kwezivakashi
Ukuphumelela nokuheha uLudmila Hariv
Ubuhlobo banamuhla phakathi kwendoda nowesifazane
Iholidini yamaRoma ngoFebhuwari 14: ukuthi yini ongayinika abathandekayo bakho nokuthi ungamhalalisela kanjani ngokuhalalisela evesini naseprose
Ukuzihlakulela kwama-Chinese: i-princess yase-China, ukubuyisela emuva nokubukeka ubuso
Croutons ushizi ubhiya
Orange smoothie cocktail
Ubuhle nempilo ekhaya
Isitayela sama-rock esembatho noma indlela yokuba yisigqila esiphambanayo
Indlela yokufeza impumelelo empilweni